Nandrolone Phenylpropionate (NPP) powder Manufacturers & Shopping - Factory
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ntụ ntụ (62-90-8)
(1 ahịa nyochaa)
Phenylpropionate (NPP) Nandrolone Phenylpropionate (62-90-8) bụ steroid nke anabolic nke a na-eji maka nkwalite ụbụrụ na ike na-akwalite uru uru. ọ dị nnọọ ka nandrolone decanoate.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ntụ ntụ (62-90-8) video
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ntụ ntụ (62-90-8) Nkọwapụta
Nandrolone phenylpropionate (NPP) ntụ ntụ bụ ihe anabolic-androgenic steroid (AAS) na 1 (2) -n'elu mmiri nke testosterone. Nandrolone phenpropionate bụkwa 3-phenylpropionate ester. Ọ nwere ọrụ dịka onye na-ahụ maka anabolic na onye androgen. Ọ na - enweta site na nandrolone.Nandrolone phenylpropionate bụ naanị ndị na - eji ma ọ bụ were ọgwụ a. Ọ bụ C18 steroid na androgenic na anabolic Njirimara. A na-akwadokarị ya site na ndị na-emepụta ihe dị na estradiol iji yie testosterone kama ọ bụ obere carbon na ọnọdụ 19. Ọ bụ usoro oge III ọgwụ na US Nandrolone bụ onye na-anabata aghara aghara na androgen. Ngwá ọgwụ na-agbanye mgbagwoju onye na-anabata ya nke na-enye ya ohere ịbanye n'ime ihe ahụ ma kee ya kpọmkwem na usoro nucleotide kpọmkwem nke DNA chromosomal. A na-akpọ ebe a na-anọchi anya ihe omume mgbochi hormone (HREs), na-emetụta ihe ndekọ ederede nke ụfọdụ mkpụrụ ndụ ihe nketa, na-emepụta etrogen mmetụta.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ntụ ntụ (62-90-8) Smmezi
Product Name Nandrolone Phenylpropionate (NPP)
Chemical Aha • NPP
• Nnamrolone hydrocinnamate
Brand Name Durabolin
Klaasị ọgwụ ọjọọ Androgen; Anabolic steroid; Androgen ester; Progestogen
molekụla Fnhazi C27H34O3
molekụla Wasatọ 406.56
Nkịtị Monoisotopic 406.251 g / mol
Mgbu Point 85-87 ° C
esi ebe 487.61 Celsius C (ike siri ike)
Ọkara Ndụ nke Ndụ ihe dị ka ụbọchị 12
Agba White ma ọ bụ na-acha ọcha Crystal ntụ ntụ
Sume Water Solubility
Sịkwa akwa Tigwe Mkpụrụ Controlled, -20? C Freezer
Antinye Ejirila ntụpọ Nandrolone Phenylpropionate (NPP) na-agwọ ọrịa cancer dị oke aka na ụmụ nwanyị nakwa dịka usoro ọgwụgwọ maka ọgwụgwọ senile ma ọ bụ postmenopausal osteoporosis na ụmụ nwanyị.
Kedu ihe bụ Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ntụ ntụ (62-90-8)?
Phenylpropionate Nandrolone bụ 19-nortestosterone (19-ma) anabolic androgenic steroid. 19 - ma ọ bụ nhazi ọkwa na-ezo aka na mgbanwe nhazi nke hormone testosterone n'ihi na e wepụrụ carbon atom na ọnọdụ 19th. Ngbanwe a dị mfe a na-enye anyị Nandrolone, sitekwa na ịgbakwunye obere Phenylpropionate ester anyị nwere Nandrolone Phenylpropionate.
Site na ọrụ steroid, Nandrolone Phenylpropionate yiri Nandrolone Decanoate. Ụdị abụọ ahụ nwere otu hormone ahụ nọ n'ọrụ. N'ihe banyere NPP, ụdị ntụgharị nke ester dị mkpirikpi nke na-eme ka nandrolone buru ibu mgbe ọ gwakwara ya, mana ọ na-eburu ndụ dị mkpirikpi. Nke a pụtara na Phenylpropionate nke Nandrolone na-agbanye ọtụtụ ugboro karịa onye ọgbọ ukwu nke ester ma ọ bụrụ na ọkwa ọbara ga-adịgide adịgide.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ntụ ntụ (62-90-8) na-arụ ọrụ
Nandrolone phenpropionate bụ naanị ndị na-eji ma ọ bụ were ọgwụ a. Ọ bụ C18 steroid na androgenic na anabolic Njirimara. A na-akwadebekarị ya site na etherl nke estradiol ka ọ dị ka testosterone kama ọ bụ obere carbon na ọnọdụ 19. Ọ bụ oge usoro III ọgwụ na US Nandrolone bụ onye na-anabata aghara aghara na androgen. Ngwá ọgwụ na-agbanye mgbagwoju onye na-anabata ya nke na-enye ya ohere ịbanye n'ime oghere ma jikọta ya kpọmkwem na usoro nucleotide kpọmkwem nke DNA chromosomal. A na-akpọ ebe a na-ejikọta ihe ndị na-eme ka hormone (HREs), ma na-emetụta ihe ndekọ ederede nke ụfọdụ mkpụrụ ndụ ihe nketa, na-emepụta mmetụta androgen.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ntụ ntụ (62-90-8) Ụdị
N'ọnọdụ ahụike, ụkpụrụ Nandrolone Phenylpropionate ga-adaba na 50-100mg kwa izu. Maka iji nwanyi eme ihe, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke a na-edekarị ya ma ọ bụrụ na edepụtara ya ga-abụ 50mg kwa izu. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro nlekọta ahụike niile, a na-edezi mbipute mbibi.
Maka ndị na-eme egwuregwu ma ọ bụ ndị na-eme egwuregwu nwere ike ịdịgasị iche iche. 100mg n'izu ọ bụla ga-enye uru dị ukwuu nke ọgwụgwọ na 200mg n'izu ọ bụla karịa ka nke a ga-eme ka ọ dị mma iji melite mgbake. N'ọtụtụ arụmọrụ nke ọma 300-400mg kwa izu ga-abụkarị ụdị dosing, nke a bụ oke zuru oke maka iwuli ma ọ bụ chekwaa anụ ahụ. Ụfọdụ ga-eji ihe ndị ọzọ, ma nke a ga-eme ka ohere nke mmetụta ndị ọzọ pụta.
N'agbanyegh i oke ojiji a na-eji nghota zuru oke kee uzo ato n'otu uzo kwa izu. Duputa ya kwa ubochi ozo maka ezi ihe. 8-12 izu, oge eji eme ihe maka ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu. Ndị na-eme egwuregwu ndị na-adịghị ahụkebe bụ ndị na-eji steroid maka izu 4-6 na ọgwụ kwesịrị ekwesị karịa 50mg kwa izu ma ọ bụrụ na nwa agbọghọ anaghị ezere.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ntụ ntụ (62-90-8) uru
Mgbochi nke Glucocorticoids
Njikọ protein na-arịwanye elu
Ịba ụba ọbara ọbara ọbara
Mmekorita Collagen & Amụma Njikere
A na-ejikwa NPP mee ihe maka ịgwọ ọtụtụ usoro ọgwụgwọ. Ndị nwere ọrịa HIV na ọrịa cancer nwere ike ịba uru site na ịgbanye ya, dị ka ndị ọrịa nwere ike ọgwụgwụ na ọrịa mgbu. Ọzọkwa, ndị ọrịa nwere ike ịba uru. Ihe atụ ndị ọzọ nke ọnọdụ ndị nwere ike ịgwọ na Nandrolone Phenylpropioniate ntụ ntụ gụnyere ọrịa ara, ọrịa anaemia, pwaritary dwarfism, ọkụ ọkụ, ọnya afọ, nsogbu mmepụta echiche (na ụmụaka) na osteoporosis.
Ịzụta Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ntụ ntụ (62-90-8) si Buyaas.com
Na-arụ ọrụ na anyị, anyị nwere ike ime ma ọ dịkarịa ala:
1. A na - emepụta ngwaahịa anyị n'okpuru cGMP ma nwee ike ịchọta àgwà ahụ.
2. A na-eme ka ịdị ọcha ahụ dị ala karịa 98%. COA; HPLC; Enwere ike inye akụkọ nyocha HNMR.
3. Ike nnyefe anyị dị ike ma na-emepụta usoro ihe omume n'oge nile.
4. Anyị nwere ahụmahụ bara ọgaranya n'ijere ahịa ahịa dị elu n'ụwa nile.
5. Na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị ozugbo, ị nwere ike belata ọnụahịa gị.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Ogwu, Nsonaazụ, Uru, Ụdị
Brennan, R., Wells, JS, & Van Hout, MC (2017). Ntughari ojiji nke onyonyo na mmekorita ndi ozo (iped) na onu ogugu ndi mmadu nile: nyocha ihe omumu. Nlekọta ahụike na elekọta mmadụ na mpaghara, 25(5), 1459-1531.
Roussel Geste, J., & Maldonado-Vlaar, CSC (2016). Mmetụta nke steroid na-etrogenic subchronic anabolic na cocaine na nchekasị-dị ka omume na okenye oke oke(Nyocha Doctoral).
Piacentino, D., D Kotzalidis, G., del Casale, A., Rosaria Aromatario, M., Pomara, C., Girardi, P., & Sani, G. (2015). Anabolic-androgenic steroid eji na psychopathology na-eme egwuregwu. Ntụle nhazi. Ugbu a neuropharmacology, 13(1), 101-121.
Brennan, R. (2017). Ihe omumu nke ethnopharmacological banyere ntinye ihe eji eme ihe na onyonyo mmelite elu (PIED) Volumes I & II(Nyocha Doctoral).
Jardí, F., Laurent, MR, Dubois, V., Kim, N., Khalil, R., Decallonne, B., ... & Claessens, F. (2018). Ụdị etrogen na estrogen akan arụ ọrụ nwoke: akụkọ karịrị akwara. Akwụkwọ nke Endocrinology, JOE-18.
1 nyochaa maka Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ntụ ntụ (62-90-8)
Ngwaahịa NANDROLONE PHENYLPROPIONATE (NPP) bara ezigbo uru.
gị Rating Rate ... zuru okè ezi nkezi Ọ bụghị na ọjọọ nnọọ Ogbenye
Mwr na-acha uzuzu Mestanolone (521-11-9)
Azu Dehydronandrolon dị elu (2590-41-2)
Nandrolone Cypionate Ihe onwunwe (601-63-8)
Hengfei Biological, nke dị na 2008, bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na-emepụta nkà na ụzụ nke dị elu iji jikọta mmepụta, R & D na ahịa.
Ntụziaka kachasị na Trestolone Acetate (MENT) maka Nrụpụta Ahụ
Testosterone phenylpropionate: Ihe ọ bụla onye na-ewu ụlọ chọrọ kwesịrị ịma